VPS BOCHUM: IHE Ọ BỤ, IHE DỊ MKPA, URU NA NKWEKỌRỊTA - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ihe VPS Bochum bụ n'ezie na otu esi họrọ onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ya
Ịhọrọ ọrụ nlekọta bụ otu n'ime nzọụkwụ kachasị mkpa na nke mbụ nke ịmepụta mkpokọta. Ndị nchịkọta weebụ na-amalitekarị na-echekwa ụgwọ dị ala, n'ihi na ego ha ezughị oke. Ha na-achọ ịhọrọ ụlọ ahịa nke ga-enye ohere kachasị mkpa maka ohere ọ bụla na-enweghị nkwụghachi ụgwọ maka ihe eji eme ihe. Ya mere, maka saịtị na-eto eto na ọnụ ọgụgụ dị ala, ha na-ahọrọkarị ọnụahịa dị ala (òkè).
Ọnụahịa ahụ bụ uru dị mkpa nke nwere ego a kpaara ókè, ma e nwere ọtụtụ ọnyà ndị na-enweghị ike ịga na nhazi oge. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu ngwa ngwa, maọbụ ọrụ nwere oke elu kacha elu dị n'otu ihe nkesa ahụ, nke a nwere ike ịkpata nkwụsịtụ na ọrụ nke saịtị ahụ. Maka ọrụ azụmahịa, nke a anaghị anabata ọbụna na nhazi mbụ, ya mere ọ ka mma ịhọrọ VPS Bochum ozugbo, nke na-enye ego ndị a kwadoro na ụgwọ ọnụahịa. Bochum ụlọ ọrụ Adminvps kọwara ọdịiche dị n'etiti VPS Bochum na ndị ọzọ.
Uru na ọghọm dị na VPS
Ihe oru ndị ị chọrọ
Otu esi ejikwa saịtị na VPS
Ihe nkesa ma ọ bụ VPS bụ ngwanrọ nke emetụtara ihe nkesa nke anụ ahụ. Ọ nwere sistemụ arụmọrụ ya, nhazi nke ntọala na ngwanrọ. Maka onye ọrụ, VPS Bochum yiri otu ihe nkesa "ígwè" na-enyekwa ụdị ọrụ ndị a. Otú ọ dị, ụfọdụ ihe onwunwe nwere ikere òkè, ebe ọ bụ na ọtụtụ ọrụ sava na-agba ọsọ n'otu ihe nkesa ahụ.
Onye nlekota VPS / VDS nwere ohere zuru ezu ma nwee ike ime iwu ọ bụla, wụnye usoro dị mkpa ma ọ bụ gbanwee nhazi. N'otu oge ahụ, ọ na-enwe mgbe ọ na-etinye ego nke ebe nchekwa nke ndị na-enye ọrụ, ndị na-emepụta ihe nhazi, ohere diski, yana ọwa Ịntanetị nke otu obosara. N'ihi ya, ndị na-enye VPS na-enye onye ọrụ ahụ ka ọ bụrụ otu nhazi, nnwere onwe na nchekwa dịka ihe nkesa anụ ahụ. N'otu oge ahụ, ọ dị ọnụ ala karịa ọnụ ahịa (ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị karịa ọnụ ahịa karịa).
Ihe nkesa a kwadoro na-enye onye ọrụ a "etiti ala" n'agbata kèkọrịta-òkè na ihe nkesa na-ehicha ahụ. Ọ na-enye akwa arụ na arụmọrụ na ego ọnụ. Ihe dị iche site na nchịkọta mbụ bụ enweghị mmetụta site na "ndị agbata obi". Oge ọ bụla nke ụbọchị VPS-hosting na-enye ọrụ gị na otu ego nke usoro ihe ọmụma.
Iṅomi mebere Bochum, VPS na raara onwe ya nye ihe nkesa, ị nwere ike ịmepụta ndị na-esonụ pros na cons:
Nchịkọta Bochum: ọtụtụ saịtị dị iche iche na-akwado ya na kọntaktị nkesa ọ bụla.
Pros: mmalite ọsọ, ọrụ dị mfe, ọnụ ala;
Cons: njikwa nta, obere arụpụtaghị ihe, dabere na oge nke ụbọchị na ịrụ ọrụ nke ọrụ ndị agbata obi.
VPS Bochum: a na-ekewa ihe nkesa na akụkụ ya ma na-enye otu akụkụ maka ọrụ gị.
Uru: nchekwa gburugburu ebe obibi, mgbọrọgwụ ohere, nhazi mgbanwe, ike arụmọrụ;
Cons: VDS dị ntakịrị karịa ọnụahịa.
Raara onwe ya nye: ihe nkesa niile a raara nye oru gi.
Ihe ndi ozo: Ogo nke oke, nche na njirimara
Cons: ọnụahịa dị oke ọnụ, ọrụ dị mgbagwoju anya ma dị oke ọnụ.
Ụlọ ọrụ na-abụghị nke azụmahịa na obere ụgbọ okporo ígwè nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ọ bụla. Mana ka arụmọrụ na-abawanye, arụpụtaghị ọrụ agaghị ezu. Ogologo akwụkwọ dị ogologo, na mgbe ụfọdụ, saịtị ahụ nwere ike 'ịda' - bụrụ nke na-enweghị ike ịgbanarị maka minit ole na ole. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịnweta ọkwa sitere na onye ọbịa ahụ na ọrụ ahụ amalitelarị ọkara nkwado ego kwa ọnwa. N'okwu a, ntinye aka na VPS-hosting ga-abụ nhọrọ kachasị mma iji hụ arụmọrụ arụmọrụ na nnweta nke saịtị ahụ mgbe niile.
A na-ahazi akụ weebụ dị na VPS / VDS n'otu ụzọ ahụ dịka na nhazi Bochum. Ọtụtụ ndị na-eweta ndị ahịa na-enye ndị ahịa otu n'ime ogwe njikwa ndị kachasị ewu ewu (ISPmanager, cPanel, Plesk na ndị ọzọ) maka n'efu. Ụfọdụ ndị na-elekọta ụlọ na-enyekwa akụkụ nke aka ha, nke na-ele anya maka otu maka ma Bochum na VDS.
Ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu na RuNet bụ ISPmanager 5 Lite. Nke a nwere otu asụsụ dị n'asụsụ Russian na-eji okwu ndị nwere nkà na-enweghị njehie (nke a na-ahụkarị na ngwaahịa ndị ọzọ). Site n'enyemaka ya, ị nwere ike igosi ụdị omume niile dị mkpa maka ịhazi VPS (na-agbakwụnye ma na-edezi ọrụ, na-ejikwa ebe nrụọrụ weebụ, databases, e-mail na ihe ndị ọzọ).
Mkpebi iji gbanwee gaa na VPS hosting bụ naanị ọkara agha ahụ. Ugbu a, ọ dị mkpa iji chọpụta onye na-enye gị, ebe ọ bụ na ahịa a jupụtara n'enye onyinye, ọ bụghịkwa mfe ịhọrọ ihe na-adọrọ mmasị. Ịchọpụta ezigbo tarifu VDS kachasị sie ike karịa ịhọrọ ịchọta gọọmenti Bochum, ebe ọ bụ na ịkwesịrị iburu n'uche nuances. Tụlee ihe ndị bụ isi a ga-enyerịrị anya.
Nchịkwa. Ezigbo nchịkọta dị na nkesa nkekọrịta, nke ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-achịkwa ya. A ghaghị nyochaa arụmọrụ nke VPS n'onwe ya, nke anaghị adị mfe mgbe niile. Ya mere, ọ ka mma ịhọrọ tarifụ na nlekọta ozugbo. Na nke a, onye ọrụ nchịkwa ọkachamara ga-elele ihe nkesa ahụ. Ịhọrọ VPS Bochum na nlekọta, ị ga-enweta uru niile nke ihe nkesa ngwanrọ na ịkwesighi iji aka gị nyochaa ọrụ ya 24 awa n'ụbọchị.
Usoro njikwa Ọtụtụ ndị na-elekọta ndị ahịa na-enye ndị ahịa ha nhọrọ nke sistemụ arụmọrụ Windows Server na ọtụtụ Linux na-ekesa. Windows enweghi uru bara uru, ma mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa maka ọrụ nke ụfọdụ ngwanrọ (dịka ọmụmaatụ, ASP.NET). Ọ bụrụ na ịnweghị iji ngwaahịa ndị dị otú ahụ, nhọrọ kachasị mma maka gị bụ VDS na Linux (ị nwere ike ịhọrọ otu nkesa nkesa na-atọ gị ụtọ na ahụmịhe, ebe ha niile na-enye ọrụ dị mkpa).
Ngwa ngwa. Imirikiti ndị na-enye ọrụ VPS / VDS enyeghị ọrụ ọsọsọ ịkekọrịta ozi gbasara ngwaike anụ ahụ nke igwe igwe na-agba ọsọ. Mana ajụjụ a bara uru ịjụ, tupu ịhọrọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe nkesa. Ọ dị mkpa ịmara ọ bụghị nanị ọnụ ọgụgụ RAM, CPU cores na diski ike diski, kamakwa klas nke ngwaike a. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na arụ ọrụ ndị ọrụ ahụ dị ugbu a, ngwa ngwa ngwa DDR4 na nnukwu SSD-draịvụ. Onye na-eji ngwaike dị otú ahụ adịghị eme ihere ịkọwa nhazi nke sava ya.
Ịdabere Ọrụ a na-egbochighị ma ọ bụrụ na VPS gị dị na-adabere na klas nke data data ebe arụ ọrụ na-eweta. Ihe ngosi dị mkpa bụ ịnweta, nke nwere ike ịbụ na 99.8% (Tier II) ma ọ bụ 99.98% (Tier III). O yikarịrị ka ọdịiche dị obere, ma ọnụahịa nke akụrụngwa dị elu karị, nke pụtara na ọrụ ndị ahụ dị oke ọnụ. Maka ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, a na-atụ aro ka ịgbazite VPS dị na ụlọ ọrụ data na otu klas ọ bụghị ala karịa Tier III.
Ngwa nchekwa. Ntughari ego nwere ike ime ka nkwenye na VDS di nma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na data data nwere onwe ya ngwa ngwa mberede (UPS na mmanụ dizel na-emepụta mmanụ), ọ dịghị atụ egwu nkwụsịtụ na ike. Ichekwa ozi ịntanetị dị mkpa. O kwesịkwara ikwe omume ịmaliteghachi VDS ozugbo ma ọ bụrụ na ọdịda nke ngwá ọrụ ọ na-arụ ọrụ.
Oghere ọwa na ókèchi okporo ụzọ. Usoro ojiji nke ịntanetị abụghị mgbe niile. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na-agbanye bandwit ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ maka okporo ụzọ maka okporo ụzọ VDS gị maka otu njedebe. A ghaghị ịkọwa ajụjụ ndị dị otú ahụ n'ọdịnihu ka ha ghara igbochi ọrụ nke ihe nkesa ahụ ma ọ bụ ka ha ghara ibuli ego ọnụahịa ahụ.
Nkwado nkwado nka. Ọbụna usoro siri ike nwere ike ịda, n'ihi ya ọ bụghị naanị ịdabere dị mkpa, kamakwa ọsọ nke nsogbu. Nkwado nkwado dị mma bụ ihe kacha mkpa ị ga-atụle ka ịhọrọ nke kachasị mma ma ọ bụ VDS. Ị nwere ike ikpebi nhazi nke nkwado teknụzụ nke onye ọrụ ahọrọ site na nyocha, nakwa site na ahụmahụ gị na nkwurịta okwu, site na ịjụ ajụjụ abụọ na mmalite nke nkwado.
Ụkpụrụ ọnụahịa. N'ezie, ọnụahịa ahụ bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ahịa. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịghọta na VPS na-agba ọsọ na ihe nkesa nke oge a na etiti data dị elu ga-efu ọtụtụ ugboro karịa ego a ga-eji otu ụdị. Ụgwọ nkwado dị mma na-emetụtakwa ụgwọ ahụ, ebe ọ bụ na ọ na-eji ndị nlekọta na-akwụ ụgwọ dị elu.
Ọnọdụ ebe ederede data. Taa enweghị ihe mgbochi ọ bụla ịhọrọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ VDS na mba ọzọ ma ọ bụ na ala ọzọ. Mana ọ ka mma ilekwasị anya na ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na ihe nkesa ahụ dị na mba ọzọ, ọ ga-enwe ike itinye ọtụtụ iri millizconds na oge ọrụ.
Inwe ike ịgbazinye adreesị IP ọzọ. Mgbe ụfọdụ ịkwesịrị ijikọ na sava ahụ adreesị IP ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye SSL asambodo maka ọtụtụ saịtị na otu VPS Bochum (ihe nchọgharị ochie na-egosi nsogbu nkwado ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ebe SSL nzuzo na otu IP adreesị). Mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa itinye ebe nchịkwa, nchekwa data ma ọ bụ subdomain n'asụsụ ọzọ na adreesị IP dị iche. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji jide n'aka tupu ọkwa ahụ a họọrọ gosiri na ị na-ejikọta IP ndị ọzọ na VDS n'elu arịrịọ.
Ọrụ ọsọ ọsọ na ọrụ siri ike bụ njirimara dị mkpa nke ihe ọ bụla saịtị ọ bụla na-adabere, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ azụmahịa. VPS-hosting na-enye nnukwu ọsọ, ebe ụgwọ ya dị nnọọ ala karịa nke nke raara onwe ya nye-nkesa. Enwere ọtụtụ onyinye dị mma n'ahịa taa, n'ihi ya, a ghaghị ile VPS anya nke ọma, jiri nlezianya tụlee ihe niile.
Nke kachasị mkpa bụ RAM. Ọ bụrụ na ị chọrọ VDS iji gbaa otu saịtị na PHP + MySQL, mgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ RAM kwesịrị ịdịkarịa ala 512 MB. Nke a zuru ezu maka saịtị nke ndị na-abịa ọnụ ọgụgụ, ma n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-enwe mmụba na ọsọ mgbe ị na-agbanwe site na kọntaktị-òkè. Ụdị ihe eji eme ihe dị mkpa. Ngwaọrụ HDD enweelarị ọhụụ, n'ihi ya ị kwesịrị ịhọrọ VPS na SSD. Na ndị dị otú ahụ na sava, ọsọ nke ọrụ na disk disk bụ ọtụtụ iri na ugboro ugboro elu, nke kacha emetụta ọnụ ọgụgụ ọsọ.
Ịgbazite ihe nkesa na-arụ ọrụ nke ikike kwesịrị ekwesị na n'otu oge ahụ ka ị ghara ịgabiga, ị ghaghị ikpebi ihe ndị a chọrọ n'ọdịnihu. Imirikiti ndị ọrụ na-enye ohere na ọrụ iji mee ka arụmọrụ nke VDS, nchekwa nchekwa, cores processor ma ọ bụ ohere disk. Mana ịtụle nhazi kacha mma ozugbo, ọ ga-adị mfe ịhọrọ tarifu kachasị mma.
Anyị na-akwado Adminvps VPS Bochum dị ka inye ndị kasị dị ịtụnanya na ngwa ngwa VPS sava.